Facebook က | October 2019
အဓိက Facebook က
လူမှုကွန်ယက်ကို Facebook မှာထဲတွင်ဘာသာစကားပြောင်းခြင်း
Facebook ပေါ်တွင်အများစုလူမှုကွန်ယက်၌ရှိသကဲ့သို့, သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တိုင်းပြည်အနေဖြင့်ဆိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအလိုအလျှောက် activated ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အတော်ကြာ interface ကိုဘာသာစကားများ, ရှိပါတယ်။ ဒီအမြင်အတွက်မသက်ဆိုင် default settings ကို၏, ကိုယ်တိုင်ဘာသာစကားပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်နှင့်တရားဝင်မိုဘိုင်း application ကိုအတွက်အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Facebook ကစာမျက်နှာ Subscribe
လူမှုကွန်ယက် Facebook တွင်ထိုကဲ့သို့သောကြေးပေးသွင်းစာမျက်နှာအဖြစ် function ကိုယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျအသုံးပြုသူများအပ်ဒိတ်များအကြောင်းအသိပေးခံရဖို့စာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီး, အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ပါ။ သငျသညျ subscribe ချင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ပုဂ္ဂလိကစာမျက်နှာ subscription ကို Go ကိုများအတွက် Facebook ပေါ်မှာစာမျက်နှာထည့်ပါ။
Facebook အဖို့ account ကိုသုံးပြီး Instagram ကိုမှ Login
Instagram ကိုရှည်လျားသောဤလူမှုကွန်ယက်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး, Facebook ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ပထမဦးဆုံးနောက်ဆက်တွဲအတွက်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ခွင့်ပြုချက်အဘို့ဒုတိယအသုံးပြုသူအကောင့်ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအများအပြားအသုံးပြုသူများအတွက်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်သည့်သစ်ကို login နဲ့ password ကိုဖန်တီးနဲ့သိုလှောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
သင်မရှိတော့လူမှုကွန်ယက်ကို Facebook ကသုံးစွဲဖို့ဆန္ဒရှိ, ဒါမှမဟုတ်ဒီသယံဇာတတွေအကြောင်းခဏမေ့လျော့ချင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်လျှင်, သင်လုံးဝဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်ယာယီသင့်အကောင့် disable နိုင်ပါတယ်။ ဤအနည်းလမ်းနှစ်ခုတွင်သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုပိုမိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အားလုံးပရိုဖိုင်းကိုဖျက်ပစ်ရန်ဤနည်းလမ်းကိုသောဤအကြောင်းအရာသည်မှပြန်လာသို့မဟုတ်အသစ်အကောင့်ကိုဖန်တီးချင်မည်မဟုတ်တော်တော်လေးသေချာနေသောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်။
လူမှုကွန်ယက်ကို Facebook ကသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပိုပြီးလူကြိုက်များနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်လာရသည်။ အဆိုပါဦးဆောင်အနေအထားလူသိများတဲ့ Facebook မှာဖြစ်ပါတယ်။ သန်းပေါင်းများစွာအသုံးပြုတဲ့အရင်းအမြစ်၏အဆိုအရလျှင်မကမ္ဘာတဝှမ်းပြီးလူပေါင်းများစွာ။ ဒါဟာဆက်သွယ်ရေး, စီးပွားရေး, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အပန်းဖြေအဆောက်အဦများအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။ တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ယက်ကိုအဆက်မပြတ်, ချဲ့ထွင်တိုးတက်အောင်အဟောင်း features တွေဖြစ်ပါတယ်။
Facebook က Instagram ကိုအတွက်ကြော်ငြာတွေကို set up
လူမှုကွန်ယက်၏ intensive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းမြှင့်တင်ရေး, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နည်းပညာများကိုများအတွက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်သူတို့ကိုတိုးလာစိတ်ဝင်စားမြင့်တက်ပေးထားတယျ။ ဤကိစ်စတှငျအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်သာကြော်ငြာထုတ်ကုန်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားမှုပြသသောသူတို့အားအလားအလာဖောက်သည်ပစ်မှတ်ထားကြောင်းလျာထားသောကြော်ငြာခြင်းကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်လှပါတယ်။
Facebook ပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ထောက်ခံမှု Creating
Facebook ကိုအတွက်လက်ရှိတွင်အချို့သောအခက်အခဲများဆိုက်အသုံးပြုမှု၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီဆက်သွယ်မှုအတွက်ဒီအရင်းအမြစ်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်ထောက်ခံမှုကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ဒီနေ့ထိုကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း၏နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုပြောပြပါ။ ဆက်သွယ်ခြင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှု Facebook ကိုကျနော်တို့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတစ်ခုက Facebook အယူခံအတွက်နှစ်ခုကိုအဓိကနည်းလမ်းများအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမရှိကြပေ။
သငျသညျမကြာသေးမီကသင်တို့၏နာမကိုပြောင်းလဲ, သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်လျှင်, သင်အမြဲသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ပရိုဖိုင်းကိုဆက်တင်များသို့သွားနိုင်ပါတယ်မှားဒေတာကြောင်းတွေ့ရှပါ။ ဤသည်အများအပြားခြေလှမ်းများအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ Facebook ကိုပထမဦးစွာပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုပြောင်းခြင်းသင် name ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ရှိရာစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုးကားစရာ Facebook ပေါ်မှာတစ်ပို့စ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှဖန်ဆင်းထားသည်
လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သူ၏ page တွင်, သငျသညျစာပမြေားအမျိုးမျိုးထားနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤပို့စ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတဦးတည်းဖော်ပြထားခြင်းချင်ပါတယ်လျှင်, သင်က link တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းစွာမှဖြစ်နိုင်စေသည်။ ပထမ၌အခြားသော post မှတစ်ဦးကိုကိုးကား Create, သင်ကထုတ်ဝေရေးသားဖို့ Facebook ပေါ်မှာသင့်ရဲ့စာမျက်နှာကိုသွားရပေမည်။
လူမှုကွန်ယက်တွင် Facebook မှ (add) upload လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုများရှုမြင်ကြသည်။ သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကကွန်ပျူတာသူတွေကိုတူညီတဲ့ကလစ်များဒေါင်းလုပ်ဒဖြစ်နိုင်ခြေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်များစွာသောအသုံးပြုသူများအသငျသညျလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများဒီဗီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြသည်။ ကွန်ယက်ကို။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Facebook အထဲကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေအမျိုးမျိုးသော software ကို tools များ၏အကူအညီထံသို့လာကြ၏။
Facebook ပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများစာရင်း Hide
ကံမကောင်းစွာပဲ, လူမှုကွန်ယက်တွင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးဖျောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ, သို့သော်, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်း၏အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကပဲအချို့ setting များကိုတည်းဖြတ်အသုံးပြုပုံအတော်လေးရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုများအတွက်အခြားအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မိတ်ဆွေများကိုဖျောက်ထားခြင်းသာ privacy settings တွေကိုသုံးစွဲဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
Facebook ပေါ်မှာအုပ်စု join ဖို့ကိုဘယ်လို
အတော်များများက social networking site များအခြို့သောအမှုအရာမှစွဲနေသောလူများ၏စက်ဝိုင်းသွားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်တစ်ဦး function ကိုရှိသည်။ ဥပမာ, "ကား" ၏နာမကိုအမှီအတူအသိုင်းအဝိုင်းကားများ၏ပရိသတ်များထံအပ်နှံကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုဤလူဖြစ်ကြ၏။ သင်တန်းသားများကို, နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကိုလိုက်နာအခြားသူများနှင့် ချိတ်ဆက်. , သူတို့ရဲ့အတှေးအဝေမျှနှင့်အခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာပါဝင်သူနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့က Facebook စာမျက်နှာကိုသွားပါ
သငျသညျ Facebook ပေါ်မှာမှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်ဤလူမှုကွန်ယက်ကိုအသုံးနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကို log in ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျတခုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိပါကသင်, သင်တန်း၏, ကမ္ဘာကြီးကို၌ဤဘယ်နေရာမှာမဆိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကမိုဘိုင်း device နဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအဖြစ် Facebook ကသို့ Log ။ သင်ကို PC ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ထဲမှာ authentication ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအားလုံးသည်ပရိုဖိုင်းအတွက်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Log - ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတစ်ဦးက Facebook Making
လူမှုရေးကွန်ရက်များ၏အခြေခံအကျဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာတစျခုမှာဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်။ ဒီစာပေးစာယူဘို့ (ချက်တင်ခန်း, ချက်ချင်းတမန်တို့ကို) ကိုတီထွင်ခဲ့ကြခြင်း, အစဉ်အမြဲသူတို့နှင့်အတူထိတွေ့အတွက်ဖြစ်ဖို့သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများ၏မိတ်ဆွေများဖြည့်စွက်။ လူကြိုက်အများဆုံး Facebook ကထိုကဲ့သို့သော function ကိုလည်းလက်ရှိဖြစ်ပါတယ် sots.seti ။ သို့သော်မိတ်ဆွေများကဖြည့်စွက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အချို့သောပြဿနာများနှင့်အခက်အခဲရှိပါတယ်။
သငျသညျလူကို access ကိုကန့်သတ်ထားကြပြီးနောက်လျှင်, သူ့ကိုသင့်ရဲ့ Chronicle မြင်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ကြကုန်အံ့တဖန်လိုအပ်သောခဲ့, ဒီအမှု၌, ကသော့ဖွင့်ထားရပါမည်။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းဖြစ်လာ, သာအနည်းငယ်တည်းဖြတ်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးပိတ်ဆို့ခြင်းပြီးနောက် Facebook ကမှအသုံးပြုသူသော့ဖွင့်, သငျသညျလမ်းကြောင်းပရိုဖိုင်းကိုပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျမပို့နိုင်ပါ။
လူမှုရေးမီဒီယာအသုံးပြုမှုခေတ်သစ်အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မလွှဲမရှောင်မှုကြောင့်အချို့သောအခြေအနေများ, အသုံးပြုသူသင့်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှုံး, ဒါမှမဟုတ်အမှားကြောင့် delete, ပြီးတော့ restore လိုလျှင်အခြေအနေများရှိနေပါသည်။ Facebook မှာ - ဤဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်လုပ်ဖို့, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူမှုရေးကွန်ယက်၏စံနမူနာစဉ်းစားပါ။
Facebook အထဲကနေနည်းလမ်းများ otvyazki applications များ
Social networking site Facebook ကသယံဇာတနဲ့ဆက်စပ်မရကွန်ယက်ထဲမှာက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အများအပြား Third-party ဂိမ်းအတွက်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Otvyazku အလားတူ applications များထုတ်လုပ်အခြေခံ settings ကိုအတူအပိုင်းမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးစဉ်အတွင်းကျနော်တို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်။ Facebook ကိုတွင် Facebook ပေါ်မှာ Otvyazka applications များရှိ Third-party သယံဇာတများမှဂိမ်း otvyazki ဖို့တစ်ခုတည်းလမ်းသာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးမိုဘိုင်း app အဖြစ်နှင့် website တစ်ခုကနေရရှိနိုင်သည်။
Facebook ပေါ်မှာစာသားကို Strikethrough ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို
အလွန်မကြာခဏအင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်သည် strikeout စာသားကိုပစ္စုပ္ပန်သောမှတ်ချက်များ, ပို့စ်များကိုအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဒီနည်းပညာကိုမကြာခဏပိုကောင်းမကြာခဏ subliminal သူတို့အကြံအစည်ကို, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတစ်ချိန်ချိန်အထူးအာရုံစိုက်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ လူမှုကွန်ယက် site ကိုခုနှစ်မှာ Facebook ကလည်းအချက်အလက်များ၏ပြဌာန်းချက်များကဲ့သို့တွေ့နိုင်ပါသည်။
လူမှုကွန်ယက်ကို Facebook မှာရှိပါတယ်ရာသုံးစွဲသူများ၏2ဘီလီယံသည် Enterprise ကလူကိုဆွဲဆောင်ရန်ပျက်ကွက်လို့မရပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားပရိသတ်ကိုကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်ထူးခြားတဲ့ရာအရပျကိုမှန်ကန်စေသည်။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်းသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာမျက်နှာများတွင်စတင်ကြိုတင်မဲနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်အခြေအနေဖန်တီးနားလည်သဘောပေါက်နှင့်ကွန်ယက်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ပါတယ်။
ငါ Facebook ပေါ်မှာ page ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသူကိုဘယ်လိုသိသလဲ
Facebook ကကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး social network ဖြစ်သည်။ ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်အရေအတွက်2ဘီလီယံလူဦးရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ မကြာသေးမီကထိုမြို့၌နေသောကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပြီး, ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနေထိုင်သူများ။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာပြီးသားထိုကဲ့သို့သော Odnoklassniki နှင့် VKontakte အဖြစ်ပြည်တွင်းလူမှုရေးကွန်ယက်များ, ၏အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံရှိခဲ့လေသည်။
https://termotools.com my.termotools.com © Facebook က 2019